အစိမ်းရောင်အရွက်တွေကို ကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုထားမလဲ - Focus Myanmar
May 25, 2019 By Myanamr Plus in ဗဟုသုတ,ူlife style Tags: အသီးအရွက်, အိမ်, နှလုံး
အိမ် မှာ အရွက်တွေ ဝယ်လိုက်တဲ့ အခါ စားလို့ မကုန်ဘဲ လွှင့်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေကြပါသလား? Diet Plan အတွက် ဝယ်ထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေဟာ စားရမယ့် ရက်အထိ မလတ်ဆတ်ဘဲ လွှင့်ပစ်နေရဖြစ်နေပါလား အစားအစာတွေကို အလကား လွှင့်ပစ်ရတဲ့ အခါ အိမ်ရှင်မတွေဟာ စိတ်ညစ်ရလေ့ ရှိပါတယ်။ Real Food Real Deals ကနေ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ အသီးအရွက်တွေကို အစိမ်းအတိုင်း လတ်ဆတ်စွာ ထားမယ့် နည်းလေးကိုပြန်ပြီး မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝိတ်လည်းချလို့ ရသလို ပိုက်ဆံတွေလည်း အလကား မဖြစ်တော့ပါဘူး။
အသီးအရွက် တွေဟာ ဝိတ်ချဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာတွေပါပဲ။ ဒီထဲကမှ အစိမ်းရောင် အရွက်တွေဟာ ပိုပြီး ဗီတာမင်၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပိုကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နှလုံး၊ ဆီးချိုနဲ့ တစ်ခြား နာမကျန်းမှုတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိမ်းရောင် အရွက်တွေဟာ အအေးခန်းထဲမှာထိန်းသိမ်းဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
ဆလပ်ရွက်တွေနဲ့ တစ်ခြား အစိမ်းရောင် အရွက်တွေဟာ ဈေးကနေ ဝယ်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ညိုးနွမ်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို ဆေးကြောပြီးမှ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော ဆလပ်ရွက်တွေဟာ တစ်ပတ်အထိ အထားခံနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားဆေးဖက်ဝင် အပင်တွေကတော့ နှစ်ပတ်ထိ အထားခံနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အရွက်တွေကို ဆေးပါ။ ဆေးတဲ့အခါမှာ အရွက်တွေကို Salad Spinner ထဲက ဇကာထဲကို အပြည့်ထည့်ပါ။ ဇကာကို Salad Spinner ထဲကအောက်ခံ ဇလုံထဲထည့်ပါ။
Salad Spinner ထဲက အရွက်တွေအပေါ် ဖုံးသွားအောင် ရေလောင်းချလိုက်ပါ။
အရွက်တွေပေါ်ကနေ ရေကို စစ်ချပါ။ ပြီးရင် အရွက်ထည့်ထားတဲ့ ဇကာကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ။
ဆေးလိုက်တဲ့အခါ ရေက ညစ်သွားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ရေတွေ ဖြူလာတဲ့အထိ ဆေးပါ။ သဘောက သဲတွေ ဖုန်တွေ မရှိတော့တဲ့ အထိဆေးပါ။
ပြီးရင်တော့ အရွက်တွေကို အခြောက်ခံလိုက်ပါ။ Salad Spinner ထဲမှာ အခြောက်ခံပါ။ မရှိရင်တော့ ဇကာနဲ့ ရေကို ခြောက်သွားအောင် စစ်ထားပါ။
ထည့်တဲ့အခါ Paper Towel တွေကို ဘူးအောက်ခြေမှာ ခံပြီး ထည့်သလို အပေါ်မှာလည်း အနည်းငယ် ထည့်ပြီး အဖုံးဖုံးပါ။
အစိမျးရောငျအရှကျတှကေို ကွာရှညျခံအောငျ ဘယျလိုထားမလဲ
အိမျမှာ အရှကျတှေ ဝယျလိုကျတဲ့ အခါ စားလို့ မကုနျဘဲ လှငျ့ပဈလိုကျရတာမြိုးတှေ ဖွဈနကွေပါသလား? Diet Plan အတှကျ ဝယျထားတဲ့ အသီးအရှကျတှဟော စားရမယျ့ ရကျအထိ မလတျဆတျဘဲ လှငျ့ပဈနရေဖွဈနပေါလား အစားအစာတှကေို အလကား လှငျ့ပဈရတဲ့ အခါ အိမျရှငျမတှဟော စိတျညဈရလေ့ ရှိပါတယျ။ Real Food Real Deals ကနေ ဖျောပွလိုကျတဲ့ အသီးအရှကျတှကေို အစိမျးအတိုငျး လတျဆတျစှာ ထားမယျ့ နညျးလေးကိုပွနျပွီး မြှဝခေငျြပါတယျ။ ဒီနညျးအတိုငျး လုပျမယျဆိုရငျတော့ ဝိတျလညျးခလြို့ ရသလို ပိုကျဆံတှလေညျး အလကား မဖွဈတော့ပါဘူး။
အသီးအရှကျတှဟော ဝိတျခဖြို့ အတှကျ အကောငျးဆုံး အစားအစာတှပေါပဲ။ ဒီထဲကမှ အစိမျးရောငျ အရှကျတှဟော ပိုပွီး ဗီတာမငျ၊ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့နဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ပိုကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ နှလုံး၊ ဆီးခြိုနဲ့ တဈခွား နာမကနျြးမှုတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ရဓောတျမွငျ့မားစှာ ပါဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့လညျး အစာစားခငျြစိတျကို ထိနျးခြုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစိမျးရောငျ အရှကျတှဟော အအေးခနျးထဲမှာထိနျးသိမျးဖို့ မလှယျကူလှပါဘူး။
ဆလပျရှကျတှနေဲ့ တဈခွား အစိမျးရောငျ အရှကျတှဟော ဈေးကနေ ဝယျလာပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ ညိုးနှမျးသှားတတျကွပါတယျ။ သူတို့ကို ဆေးကွောပွီးမှ သိမျးမယျဆိုရငျတော ဆလပျရှကျတှဟော တဈပတျအထိ အထားခံနိုငျပါတယျ။ တဈခွားဆေးဖကျဝငျ အပငျတှကေတော့ နှဈပတျထိ အထားခံနိုငျပါတယျ။
အရငျဆုံး အရှကျတှကေို ဆေးပါ။ ဆေးတဲ့အခါမှာ အရှကျတှကေို Salad Spinner ထဲက ဇကာထဲကို အပွညျ့ထညျ့ပါ။ ဇကာကို Salad Spinner ထဲကအောကျခံ ဇလုံထဲထညျ့ပါ။
Salad Spinner ထဲက အရှကျတှအေပျေါ ဖုံးသှားအောငျ ရလေောငျးခလြိုကျပါ။
အရှကျတှပေျေါကနေ ရကေို စဈခပြါ။ ပွီးရငျ အရှကျထညျ့ထားတဲ့ ဇကာကို ပွနျထုတျလိုကျပါ။
ဆေးလိုကျတဲ့အခါ ရကေ ညဈသှားတာ တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ရတှေေ ဖွူလာတဲ့အထိ ဆေးပါ။ သဘောက သဲတှေ ဖုနျတှေ မရှိတော့တဲ့ အထိဆေးပါ။
ပွီးရငျတော့ အရှကျတှကေို အခွောကျခံလိုကျပါ။ Salad Spinner ထဲမှာ အခွောကျခံပါ။ မရှိရငျတော့ ဇကာနဲ့ ရကေို ခွောကျသှားအောငျ စဈထားပါ။
ပွီးရငျ ဘူးတှနေဲ့ ထညျ့ပါ။ ဒါမှမဟုတျ ဇဈအိပျအပါးလေးနဲ့ ထညျ့ပါ။
ထညျ့တဲ့အခါ Paper Towel တှကေို ဘူးအောကျခွမှော ခံပွီး ထညျ့သလို အပျေါမှာလညျး အနညျးငယျ ထညျ့ပွီး အဖုံးဖုံးပါ။